HireMatch စျေး - အွန်လိုင်း HIRE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို HireMatch (HIRE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ HireMatch (HIRE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ HireMatch ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
HIRE – HireMatch
Market ကဦးထုပ်: $194 395.00
volume_24h_usd: $37 525.80
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ HireMatch တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
HireMatch များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
HireMatchHIRE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0175HireMatchHIRE သို့ ယူရိုEUR€0.0149HireMatchHIRE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0133HireMatchHIRE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.016HireMatchHIRE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.157HireMatchHIRE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.111HireMatchHIRE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.389HireMatchHIRE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0653HireMatchHIRE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0233HireMatchHIRE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0243HireMatchHIRE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.391HireMatchHIRE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.135HireMatchHIRE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0957HireMatchHIRE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.31HireMatchHIRE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.95HireMatchHIRE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.024HireMatchHIRE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0264HireMatchHIRE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.543HireMatchHIRE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.121HireMatchHIRE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.85HireMatchHIRE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩20.67HireMatchHIRE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦6.76HireMatchHIRE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.28HireMatchHIRE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.483
HireMatchHIRE သို့ BitcoinBTC0.000001 HireMatchHIRE သို့ EthereumETH0.00004 HireMatchHIRE သို့ LitecoinLTC0.000299 HireMatchHIRE သို့ DigitalCashDASH0.000182 HireMatchHIRE သို့ MoneroXMR0.000186 HireMatchHIRE သို့ NxtNXT1.3 HireMatchHIRE သို့ Ethereum ClassicETC0.00248 HireMatchHIRE သို့ DogecoinDOGE4.94 HireMatchHIRE သို့ ZCashZEC0.000198 HireMatchHIRE သို့ BitsharesBTS0.64 HireMatchHIRE သို့ DigiByteDGB0.557 HireMatchHIRE သို့ RippleXRP0.0574 HireMatchHIRE သို့ BitcoinDarkBTCD0.000586 HireMatchHIRE သို့ PeerCoinPPC0.0552 HireMatchHIRE သို့ CraigsCoinCRAIG7.74 HireMatchHIRE သို့ BitstakeXBS0.725 HireMatchHIRE သို့ PayCoinXPY0.297 HireMatchHIRE သို့ ProsperCoinPRC2.13 HireMatchHIRE သို့ YbCoinYBC0.000009 HireMatchHIRE သို့ DarkKushDANK5.45 HireMatchHIRE သို့ GiveCoinGIVE36.79 HireMatchHIRE သို့ KoboCoinKOBO3.87 HireMatchHIRE သို့ DarkTokenDT0.0161 HireMatchHIRE သို့ CETUS CoinCETI49.05